25-ka lambar sir ee ugu xun 2015 | Wararka IPhone
Hal sano oo dheeri ah shirkadda SplashData ayaa ina tusaysa ama bandhigyo badan sida aan u isticmaaleyno marka ay timaado ilaalinta xogtayada internetka gacanta dadka kale. Waqti ka waqti waxaa jira warar ku saabsan xatooyada xisaabaadka ee dadka caanka ah sida tii dhacday sanad ka hor ee iCloud iyo sidii markii dambe la tusay, inta badan furaha sirta ah ee la isticmaalay waxay ahaayeen kuwa aan kugu tusinayno qoraalkan, qor 123455, 111111, lambarka sirta ah ...
Waxaan nahay xayawaan caado oo ma ahan waxaan jecel nahay inaan si joogto ah u hubino codsi ama liis muujinaya nambarka sirta ah ee aan isticmaalno maalin kasta si aan ugu helno adeegyada kala duwan ee shabakadda aan adeegsanno. Tan waxaa loo cadeeyay inay wax yeeleyneyso madaama aakhirkiina aanan nagu adkaanin dejinta furayaasha sirta ah si aan si fudud ugu xasuusano.
Suuqa waxaan ku leenahay xulashooyin kala duwan taas noo oggolow inaan si deg deg ah ula tashanno furayaasha in aan ku hayno adeegyada kala duwan ee webka ee aan isticmaalno maalin kasta, sida 1Password, oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican noocan oo kale ah oo waliba leh codsiyo PC iyo Mac ah si aan si deg deg ah ugu soo galno boggeena internetka anaga oo aan wax xog ah galin, maadaama dalabku wuxuu daryeelayaa inuu si otomaatig ah u sameeyo.
Hoos waxaan ku tuseynaa liiska diirkja dambeeya inta badan adeegsadayaasha sanadkii aan dhammeynay. Iyada oo ay macquul tahay in ay u muuqato, inbadan oo ka mid ah waxaa adeegsada tiro aad u tiro badan oo isticmaaleyaal ah laakiin sidoo kale dhammaan adeegyada websaydhka ah ee ay galaan, marka haddii qof uu maamulo in uu galo koontooyinkeenna, waxay sidoo kale marin u heli karaan adeegyada intiisa kale waxaan ku leenahay internetka.
Samee furayaal sir ah
Habka ugu fiican ee lagu helo lambarka sirta ah ee adag waa isticmaal lambarada iyo xarfaha labadaba dhexdeeda, iyo inay sidoo kale leedahay ugu yaraan hal dabeecad kale.
Tilmaam kale ayaa ah ha isticmaalin isla erayga sirta ah dhamaan adeegyada webka ee aan isticmaalno.
Adeegso barnaamijyada sida 1Password kaas sameyso furayaal sir ah oo adag sidoo kalena kaydi si ammaan ah tixraac dhakhso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » 25-ka sirta ah ee ugu xumaa sanadkii 2015
Sida loo muujiyo bar safarka ee Safari ee iOS